Taunggyi - The Cherry Land: မွေတော်ကက္ကူ ပုံများ
ရေးသားသူ yma အချိန် 2:05:00 PM
ကိုရဲရေ..ဘယ်သူမှ ဘယ်လိုမှ မထင်ပါဘူး...ရိုက်သာရိုက်..အားပေးတယ်...ကျွန်တော်တို့ လို အဝေးရောက်နေတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ကိုရဲရဲ့လက်ရာတွေက အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်...နောက်ထပ်များစွာကို အားပေးနေပါတယ်...
Monday, October 22, 2007 3:15:00 PM
ရိုက်သာရိုက်ဗျို့ ။ တန်ဆောင်တိုင် ကျရင်လဲ
Monday, October 22, 2007 3:50:00 PM
ကိုရဲမြန်မာရေ.. အဲဒီလိုမှန်းသိရင် ဘုရားအမှတ်စဉ် ၆၆၄ ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်.. ဘုရားပြင်ဖို့ လှူထားပြီးပေမယ့် အခုထိ ပြင်ပြီးသား ဘုရားကို မမြင်ဖူးသေးဘူး။ ကိုယ်လှူဒါန်းထားတဲ့ ဘုရားကို ကြည့်ချင်တာပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုရဲမြန်မာကိုတော့ ဘုရားဓာတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရှေးဟောင်းဘုရာတွေပြုပြင်ရင် ကိုင်တွယ်မှုအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ရှေးကအုတ်ကျိုးအုတ်ပျက်ဟာအလွန်တန်ဘိုးရှိပါတယ်။
ပုဂံမှာ အုတ်အသစ်တွေ ကိုထိပ်ဖူးတွေတင်လို့ နိုင်ငံခြားသားများရင်ကျိုးကြပါတယ်။
Tuesday, February 12, 2008 3:39:00 AM
Wednesday, November 05, 2008 1:42:00 PM
Well done Ko Thura. Thanksalot for the pictures. You did right things - for sharing the historical architecture skill in Pagoda.